ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: အိန္ဒိယမသွားခင် အွန်လိုင်းကို အရင်သွားပါ
အိန္ဒိယမသွားခင် အွန်လိုင်းကို အရင်သွားပါ
အင်တာနက်ခေတ်ထဲ ရောက်နေကြပြီ ဆိုတာကို အိန္ဒိယသွားမယ့်သူတွေက ပိုပြီး သဘောပေါက်နေကြဖွယ် ရှိပါတယ်။
ဗီဇာလျှောက်မယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းကနေလျှောက်ပါ ဆိုတာကို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယသံရုံးရဲ့ အရင်တပတ်က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
အွန်လိုင်းကလျှောက်ရုံနဲ့လည်း ဗီဇာ မရသေးပါဘူး။ သံရုံးသွားပြီး လက်ဗွေပေးရတာတို့ ဘာတို့ လုပ်ရပါအုံးမယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ နည်းလမ်းတွေအတိုင်းပေါ့။
လုပ်ငန်းရှင်တွေက နေပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနကို ဒီအကြောင်း ပြောပြကြပါတယ် တဲ့။
သာသနာရေးဝန်ကြီးရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်က -
ဒီလို ကိစ္စမျိုးက မိမိတို့ ဌာနနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါ။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကနေ တစ်ဆင့် တင်ပြပေးပါ့မယ်။
အိန္ဒိယသံရုံးရဲ့ ဗီဇာဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြောင်းအလဲမှာ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ဆီက အသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူးတွေ အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်စေတယ်လို့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင် ဒေါ်နှင်းမိုးဝေ ကပြောပါတယ်။
“ဂါယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်ကို လိုက်တဲ့လူတွေက နယ်တွေကလည်း များတယ်။ နယ်က လာတဲ့ လူဆိုရင် ဒီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အဆင် မပြေနိုင်ဘူး။
ငွေလည်း ထပ်ကုန်နိုင်တယ်။ အချိန်လည်း ကုန်နိုင်တယ်။ လူပင်ပန်းလည်း ဖြစ်အုံးမယ်”
“တစ်နေ့ တစ်နေ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေ လာမယ့် လူတွေက အများကြီး ဆိုတော့ အဲဒီစနစ်မှာ ဆိုရင် သံရုံးမှာ လူတော်တော် သွားပုံနေလိမ့်မယ်။
သံရုံးကလည်း အချိန်အကန့် အသတ်နဲ့ ဆိုတော့ ပြီးမှာကို မဟုတ်တော့ဘူး”
ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး
“သူတို့နိုင်ငံ လုံခြုံ ရေးအတွက် ဗီဇာ စနစ်ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးတာကို ဒီဘက်က ဘယ်ဝန်ကြီးကမှ သွားပြောလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
သူတို့နိုင်ငံက ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေက အဆင့်ဆင့် ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ကျလာတဲ့ စနစ်ကို ဒီဘက်ကနေ အဲဒီစနစ်ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောလို့မှ မရတာ။ သူတို့ဘက်က လိုအပ်တယ်ထင်လို့ ပြောင်းလဲတာ”
Ruby Land ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ MD ဦးအေးကျော်
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို မြန်မာပြည်သားတွေ သွားရောက်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ဘုရားဖူး၊ ပညာသင်၊ စီးပွားရေး စတဲ့ ကိစ္စရပ်များကြောင့်ပါပဲ။
လတ်တလော အပြောင်းအလဲကြောင့် ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူး အရေအတွက် လျော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးခင်အချိန်အထိ ဗုဒ္ဒဂါယာ ဘုရားဖူး အရေအတွက် တိုးတက် များပြားနေပါတယ်။
ဂါယာ ဘုရားဖူး ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ကိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကတော့ ၅၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အပိုင်း (၆)- ရှေးဟောင်းမြို့တော် ဗာရာဏသီ
အပိုင်း (၅)- ဖွားတော်မူတဲ့ လုမ္ပီနီ
အပိုင်း (၄)- ပတ္တနား၊ ဝေသာလီနဲ့ ပရိနိဗာန်ပြုတဲ့ ကုသိနာရုံ
အပိုင်း (၃)- ရာဇဂြိုလ်၊ နာလန္ဒာ တက္ကသိုလ်
အပိုင်း (၂)- ဒုက္ခရစရိယာ ကျင့်ရာ တောင်နဲ့ သုဇာတာ ရွှေခွက်မျောရာ နာရဉ္ဇရာမြစ်
ရန်ကုန်ကနေ ဂါယာ ကိုသွားမယ်ဆိုရင် ကျပ် ဆယ်သိန်းနီးပါး ကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။
ဂါယာသွားမယ့်သူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဗီဇာဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Withaview to provide efficient and hassle free service to the visa applicants, the Embassy of India, Yangon has introduced Online Visa Application and Biometric Enrolment system with immediate effect. To apply visa online, one would need to fill up the form at http://indianvisaonline.gov.in/visa/ and take the print out of the application and then submitted it to the Embassy along with2photos of 2" X 2" (inches) with black and white background, copy of passport and other relevant documents.
Under the revised process, all applicants are required to physically appear at the Mission for enrolment of Biometric Traits. Applicants below 12 years and above 70 years of age are exempted from 'Biometric Enrolment'.
3. Select office “Myanmar Yangon".
This site (indianvisaonline.com) is best viewed in Internet Explorer (Windows) version 8.0 and above.
If you do not have Adobe Acrobat Reader version 7.0 or higher, you may downloadacopy.
You should use either an Ink-Jet or Laser printer to print the completed Visa Application form/s once you have submitted it online.
Sign and date it and present it along with the relevant documents and passport to Embassy of India, Yangon.
Depending on the speed of your Internet connection, it may take several minutes to download the initial and completed copies of the form/s. We request you to please leave your popup blockers turned off for the duration of this activity.